अनलाईन मिटिंगमा मन्त्री योगेश भट्टराई बोल्दा बोल्दै ब्लु फि’लिम बज्न थालेपछि …. – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Uncategorized/अनलाईन मिटिंगमा मन्त्री योगेश भट्टराई बोल्दा बोल्दै ब्लु फि’लिम बज्न थालेपछि ….
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले सोमबार दिउँसो पर्यटनसँग सम्बन्धित सुरक्षा निर्देशिका सार्वजनिक गर्न ‘जुम एप’ भर्चुअल बैठक आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई प्रसमुख तिथि थिए । जब सार्वजनिक भच्र्यूअल कार्यक्रममा मनत्री बोल्न सुरु गरे, एक्कसी पोर्न भिडियो बज्यो । अनाधिकृत रुपमा भर्चुल मिटिङमा प्रवेश गरेका ‘ह्यारिस’ नामको आईडीबाट यस्तो हरकत भएको थियो ।
यस्ता मिटिङमा पछिल्ला समयमा ह्याकरहरुले अनाधकृतिक रुपमा एक्सेस गरेर अश्लिल भिडियो बजाइदिने गरेका छन् ।नेपालमा पनि यसको प्रयोग बढ्दै गर्दा यस्ता समस्या बढेको छ । यो एप माथि तर सुरक्षा लिएर एपमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । भारत सरकारले त यो एप सुरक्षित नभएको भन्दै प्रयोगबारे गाइडलाइन नै जारी गरेको छ । यसअघि पनि धेरैपटक जुम एप बैठकमा गोपनीयताबारे प्रश्न उठेको थियो ।